ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုကို အင်အားကြီးမားတဲ့ စစ်တပ်ကြီးနဲ့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ (ချာတာ) ကို ချိုးဖောက်တဲ့အရေးမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရုရှားဘက်ကနေတယ်။ သံတမန် အသုံးစကားတွေ မထည့်တော့ပါ။ ကျွန်တော်ဆီကအချိန် တနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်းမှာ (အွန်လိုင်း) အစည်းအဝေးရှိတယ်။ ၂၀၂၀ အမတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးအစုအဖွဲ့မှာ ကျွန်တော်က ၁၉၉၀ အမတ်အစုကိုယ်စားပါရတယ်။ မနေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို တယောက်က မေးပါတယ်။ နယူးဒေလီ ထိပ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ မသိသူ မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယကို ချဉ်းကပ်ဘို့ တွက်ခြေမကိုက်လောက်ပါ။ ကျွန်တော်က အိန္ဒိယကို ၂၁-၁၂-၁၉၉၀ နေ့မှာ ရောက်တယ်။ ၂၁-၅-၁၉၉၁ နေ့မှာ ရာဂျစ်ဂန္ဒီ လုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက် အိန္ဒိယဟာ မီးဆင်ကြည့်ကနေရတယ်။ တဘက်က တရုပ်၊ တဘက်က ပါကစ်စတန်ကိုသာ ကြည့်တယ်။ တခြားကို မကြည့် မမြင်ပါ။ စာရွက်ပေါ်မှာတော့ (လွတ်ခ် အိစ်) တဲ့။ ရိုးလာတော့ (အက် အိစ်) တဲ့။ ဒေလီကိုကျွန်တော်သွားပြီး တွေ့ဆုံပြောဆိုရတဲ့စရိတ်စကနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက် ရနိုင်လောက်တဲ့ အကျိုးက မကာမိနိုင်။ ကျွန်တော်က အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို နောကျေအောင
လက်ဖက်အကြောင်းကို ကမ္ဘာ့စွယ်စုံကျမ်းများက ရေးသားဖော်ပြကြတဲ့အခါ လက်ဖက်ရည်ဟာ ရေကလွဲရင် လူသားတွေ အသောက်သုံးဆုံး အရည်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ လက်ဖက်ရည်(အချို)၊ လက်ဖက်ရည် (အဖန်-အခါး) ဟာ ရေကလွဲရင် လူတွေ အသောက်သုံးဆုံးအရည် ဆိုတဲ့စကားဟာ သိတ်မှန်တာပေါ့။ ကော်ဖီတွေ၊ ကိုကိုးတွေ ရှိသေးသားကပဲ။ နို့ပေမယ့် လက်ဖက်ရည်လောက် လူကြိုက်မများဘူး။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လက်ဖက်ရည်အချိုဟာ စစ်ပြီး ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကော်ဖီထက် ပိုပြီး သောက်သုံးသူများလာတာ တွေ့ရတာပဲ။ လက်ဖက်ရည် (အဖန်-အခါး) ကတော့ ကျွန်မတို့ တောသူတောသား တွေရော၊ မြို့နေ လူပေါင်းစုံရော ရှေးကလည်းသောက်တယ်။ အခုလည်း စုံစုံမက်မက် သောက်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အဲ တခြားနိုင်ငံတွေထက် ကျွန်မတို့နိုင်ငံက လက်ဖက်ကို ပိုပြီး တမျိုးတဖုံ၊ စားသုံးမှု ရှိသေးတယ်။ လက်ဖက်ရွက်ကို ခူးပြီး မီးနဲ့ ပေါင်းပြီးသိပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်စိုကို စားတဲ့ ဓလေ့ လေ။ လက်ဖက်စိုကို ဒီလိုစားတာ နိုင်ငံများများ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ တခမ်းတနား အများဆုံး စားတာက ကျွန်မတို့နိုင်ငံ၊ ပြီးတော့ အနည်းအပါး စားတာက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဒါလောက်ပါပဲ။ လက်ဖက်စိုကို ကျွန်မတို့နိုင်ငံက ရိုးရာလူမှုဓလေ့အဖြစ်နဲ့ စားသုံးတယ်။ ခံတွင်းချဉ်ပြေစေ
သခင့်ခြံတွင် တပွင့်ကျန်သော ပန်းကလေး။ မခူးအား၍ ဆူးကြား ကျန်ရစ်ခဲ့လေသလော။ မခူးရက်၍ ဆူးထက် ချန်ခဲ့လေသလော။ မခူးလို၍ ဆူးညိုကြားတွင်၊ သူ့ကံပင်ဟု တမင် စွန့်ခဲ့လေသလော။ မည်သို့ဖြစ်စေ သခင့်မြေ၌၊ ညနေရီနှင့် လွမ်းအောင်ပွင့်သည်၊ တပွင့်ကျန်သေး ပန်းကလေးကြောင့် တေးသီငှက်ဆွေ၊ အဆွေးပြေသည် နွေဦးဆန်းစမှာတကား။ ။ ဆရာတင်မိုး ၁၄-၁၀-၁၉၇၃ နေ့စွဲပါကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ် ကျွန်တော် ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီ။ ကဗျာတွေစာတွေ မဖတ်အားတော့ပါ။ ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေ ကျဲပါးတော့မှသာ စာတွေကို ပြန်ဖတ်ရတော့တယ်။ မြန်မာစာခြံကျယ်ကြီးထဲက သုံးပန်လှမဟုတ်ကြတဲ့ပန်းတွေ အရောင်ပြောင်းကုန်ကြတာ တွေ့ရပါတော့တယ်။ ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ လယ်စောင့်တဲလေးနားက ကြာနီတွေ ကြာဖြူတွေပါ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် တစ်ချင်ရာတစ်ကုန်ပါရော့လား။ ဆရာတင်မိုးရဲ့ ကဗျာပန်းခုံကြီးပေါ်က ဒီကဗျာလေးတော့ တချို့နေရာမှာ အကောင်းပတိရှိသေးတယ်။ နဂိုအဆင်းနဲ့ အရင်ကမွှေးရန့ံအတိုင်း ရှိတဲ့ပန်းဆိုတာ တပွင့်တလေသာ ကျန်ရှာတော့ပါလား။ တပွင့်ကျန်သေး ပန်းကလေးကြောင့်၊ တေးသီငှက်ဆွေ၊ အဆွေးပြေသည် နွေဦးဆန်းစမှာတကား။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၃-၂၀၁၉
ဦးနုနှင့် ဝန်ကြီးတဖွဲ့လုံး ဖမ်းထားပြီ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ် ၂ ရက်နေ့ အထောက်တော်သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီ အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကို တောင်သူလယ်သမားနေ့လို့ လုပ်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းက တရုပ်ခေါင်းဆောင်ကို ပေးတဲ့စာမှာ တစ်ပြည်ထောင်နဲ့ တစ်ပြည်ထောင်တဲ့။ သဘောမတူသူတွေက ကိုယ်ကြိုက်သလို ရေးခွင့်ရှိသေးတယ်။ နောက်တခါ အာဏာသိမ်းပြန်တော့ မြန်မာစာကိုပါသိမ်းတာ ရေးခွင့်မရှိတော့။ အခုထိ အာဏာတည်နေဆဲ။ နာခံသူတွေက (တစ်)တိုင်း(တစ်)ပြည်တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ပျံ နှင့် ပြန်
၁။ ဆရာရှင့် ပြန်၊ ပျံ အသုံးလေး သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ၂။ အရက်ပြန်ရပါပြီ။ အရင်က ကုန်နေလို့ မရခဲ့တဲ့အရက် အခုပြန်ရပြီလို့ ဆိုလိုတယ်။ ပုံမှာက အရက်ပျံ ပုလင်းတွေ။ ၃။ ဆရာ ဂျာနယ်သမားတွေ ခွေးရူးကို အတောင်တပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဖော်ပြပါဂျာနယ် စာ ၇၊ ညာဘက် အောက်ခြေထောင့်က သတင်းပါ ခွေးရူးပျံတဲ့။ ခွေးရူးပြန်။ ပျံ ခုန်ပျံကျော်လွှား ငှက်ပျံ စကြာပျံ စျာန်ပျံ ပျံကျသမား ပျံချီဘွဲ့ ပျံတံတံ နန့်တန့်တန့် ပျံလွန်တော်မူသည် ပျံလွှားငှက် ပျံသန်း ဘုန်းကြီးပျံ မိန်းမပျံ ရှူးပျံ လွန်းပျံယာဉ် လူပျံတော်ပတ္တမြား ဝထီးငပျံ ဝဲကာပျံ ဥက္ကာပျံ လေယာဉ်ပျံ ပြန် စကားပြန် စားမြုံ့ပြန် စာပြန်ပွဲ တပြောင်းပြန်ပြန် နာရီပြန် ဘာသာပြန် ပြန်၍လုပ် ပြန်ကဘက်ကြိုးသီချင်း ပြန်ကဟပ်စာစပ်နည်း ပြန်ခရာ ပြန်တမ်း ပြန်ကြွတော်မူ ပြန်ကြားသည် ပြန်ကြားရေး ပြန်လည်ထူထောင် ပြန်လှန်ပြောဆို ပြန်လာ ပြန်သွက်လှယ် = လှည့်၍ပြန်ခဲ့သည် ပြန်သွား ပြန်ပေါင်းထုပ် ပြန်ပေဆောက = အဆောတလျင် ပြန်ကြားပြောဆိုသည် ပြန်ကြော်ဟင်း ပြန်ပြော ပြန်ပြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောဆို ဖြစ်ပြန် ပျက်ပြန် လောကဓံ ရှင်လိင်ပြန် လက်ပြန်ကြိုး လူပြန်တော် (လူပျံတော်နှင့် မတူ) လူပြန်ပေးဆွဲ အနက်ပြန် အမိန့်တော်ပြန် အ
ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်ကျမ်းများနှင့် မိတ်ဆက်စာတမ်း
အမှာစာ သမုဒ္ဒရာရေတစက်တပေါက်ကို လျှာပေါ်၌ တင်ရုံမျှနှင့်ပင် အတိုင်းမသိ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်း မြားမြောင်လှသည့် သမုဒ္ဒရာရေထုကြီးတခုလုံး၏ ငန်သောအရသာကို သိနိုင်ပေသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ကမ္ဘာအေးစာပုံနှိပ်တိုက်၌ ရိုက်နှိပ်သည် သာသနာ - ၂၉၅၉ ကောဇာ - ၁၃၇၇ ၂၀၁၆ ခုနှစ်။ မူရင်းကျမ်းတော်ပါ မြန်မာစာ သတ်ပုံကို လေးစားစွာ တင်ပြပါတယ်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ထုတ် မြန်မာအဘိဓာန် (၁၉၉၁ ခု၊ စက်တင်ဘာလ) ပါ သတ်ပုံတွေနဲ့ မတူပါ။ ပိဋကတ်တော် မြန်မာပြန်မူရင်းတွေမှာ မြန်မာစာ သတ်ပုံတွေ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မြန်မာတို့သည် ဂါထာမန္တာန် မန်းမှုတ်သောအခါ သက္ကတဂါထာ မန္တာန်များတွင် အစ၌ (ဥုံ) ဟူသော အသံနှင့် (ဖွ) ဟူသော အသံကို အာဏာစက်ရှိစေရန် ပြင်းပြင်ဒထန်ထန် မန်းမှုတ်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဂါထာအကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ရွတ်ဆိုသည်ကို ပမာပြု၍ (ဥုံတလဲလဲ ဖွတလဲလဲ) ဟူ၍ ဥုံ နှင့် ဖွ ကို တပြန်စီ ရွတ်ဆိုသကဲ့သို့ အဖန်ဖန်ပြောဆိုခြင်းကို တင်စား၍လည်း သုံးစွဲပြောဆိုကြသည်။ ထပ်ကာထပ်ကာ ကြိမ်ဖန်များစွာဟူသော အနက်ရ၏။ အစ သေဝပ်ငြိမ်သက်ပြီးကိစ္စကို ပြန်၍ ပွအောင် ဖွကာ၊ ဖွကာ လှုံ့ဆွဖော်ထုတ် ပြောဆိုခြင်းဟူ၍ အချို့ယူဆကြသည်။ (လှသမိန်ရေးသားသည့် မြန်မာ့ဘန်းစကားများစာအုပ်) ခုခေတ် (ရုပ်ဆိုးသမိန်) တွေကတော့ (တစ်)ဖွဖွ တဲ့။ (တစ်) ပြန်စီ တဲ့။ ဥုံ(တစ်)လဲလဲ ဖွ(တစ်)လဲလဲ တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
CA 125 ကင်ဆာစစ်ဆေးနည်းတခု
၁။ အမက အဖြေက အာ့လို မျိုးတွေ၊ ဘယ်လို ကုရမလဲ မရှင်းဘူး ဓါတ်ရောင်ခြည် သင့်တာဆိုလား အူက အဖတ်ဖတ် ဖြစ်ပြီး ဘာစားစား ဗိုက်နာနေတာ၊ နည်းလမ်းရှိရင် ဘာ်(ဘယ်)လို ကုသရမလဲ ဆရာ ဆရာမ အကို အမတို့ ရှင့် ကျေးဇူးပြု ဖြေပေးပါရှင့် ကျွန်တော့ကို မေးတာ မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်တဲ့သူ အသက်၊ အချက်အလက်တွေ မသိပါ။ ရမ်းမဖြေပါ။ ၂။ CA 125 က အသားစကိုယူစစ်တာလား သွေးကိုလား ပီး (ပြီး) တော့ နာလား သိချင်လို့ပါ သွေးကိုစစ်တာဖြစ်တယ်။ ၃။ ဆရာရှင့် ကျမ အသက် ၄၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် သားကလေးတယောက် မိခင်ပါ။အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကျမ Medical Check up လုပ်တော့ CA 125 စစ်တာ 56 ဖြစ်နေလို့ OG နဲ့ပြန်ပြတော့ ၃ လ ကြာမှ TVS Ultrasound ရိုက်ခိုင်းပြီး CA125 ပြန်စစ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေး သိပါရစေရှင့်။ ၄။ သမီးရဲ့ CA 125 သွေး Result ကို ပို ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ သမီးရဲ ့OG ကတော့ မခွဲစိပ်နဲ့လို့ ပြောပါတယ်။ ၈ လပိုင်း ကတည်းကစပြီး အောင့်တာ Ultrasound ရိုက်တော့ ဘာမှမတွေ့တော့ OG က Mervalon3month on ပါတယ်။ ဒီလ ၁၂ ပိုင်း နည်းနည်းပြန်အောင့်တာနဲ့ Ultrasound ပြန်ရိုက်တာ အခုမှ သွေးလုံးရှိမှန်းသိတော့ အရမ်းကြောက်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဆီ အကြံတောင်းလိုက်တာပါ။ အိမ်ထောင်ပြုလို ရ၊
Natural Ways to Lower Your Blood Pressure သွေးတိုးကျစေတဲ့ အိန္ဒိယက တိုင်းရင်းဆေးနည်း
အညာသားဆိုတော့ တမာရွက်ပြုတ်ကြိုက်တာ၊ ဆရာကရေးထားတယ် သွေးမတိုးဘူးတဲ့၊ စားမယ်ပြောတာကို အိမ်ကအစားမခံဘူးဆရာရေ၊ သွေးတိုးတယ်ချည်းစွဲနေကြတာ။ Neem leaves တမာရွက်နဲ့ Tulsi (Basil) ပူဒီနာရွက်တွေက သွေးတိုးကျစေပါသတဲ့။ အိန္ဒိယက တိုင်းရင်းဆေးနည်းကို လေ့လာမှုပြုထားတာမှာ ပါတယ်။ ဘာသာမပြန်တော့ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လက်ခံမဲ့သူ မရှိလောက်။ According to the journal Studies of Ethno-Medicine, combination of neem and tulsi was beneficial to lower the blood pressure levels due to their active compounds. Hawthorn berries are rich in flavonoids that include quercetin and oligomeric procyandins that boost heart health. The antihistamine effects of neem leaves can cause blood vessels to dilate. This is why these leaves can help lower blood pressure. Taking neem extract or capsules foramonth can also lower the high cholesterol levels. 1. Punarnava 2. Ashwagandha 3. Gotu Kola 4. Tulsi Leaves 5. Hawthorn5Natural Ways to Lower Your Blood Pressure https://www.ndtv.com/food/5-natural-ways-to-lower-your-blood-pressure-17490
၆။ လောက သခင်၊ သုံးလူ့ရှင်လည်း၊ ပြတ်သင်္ဃာပေါင်း၊ ခွင့်တောင်းသောအား၊ ရှစ်ပါးအင်္ဂါ၊ ပြည့်စုံစွာတည့်၊ သာယာသံညီ၊ အာလုပ်ချီလျက်၊ မဟိသရဘူ၊ စ၍ယူသော်၊ ငါးဆူ ငါးရာ၊ မြစ်သီတာသို့၊ ရောက်လှာအမြဲ၊ ဝင်မစဲတည့်၊ ခက်ခဲ ရေကြီး၊ ပြင်းခတ်စီးလျက်၊ ခရီးကျယ်ပြော၊ ပင်လယ်ကြောသို့၊ လေးသြဃတွင်း၊ ဝိုက်လှောင်သွင်းမှ၊ မဆင်းမရဲ၊ လွတ်မည်ပွဲလည်း၊ ခဲခဲ ယဉ်းယဉ်း၊ အနေကျဉ်းလျက်၊ တညှဉ်းဆိုးတိုး၊ တစိုး ရိမ်ရိမ်၊ နလိမ် လစ်လစ်၊ တဖြစ် သွေးသွေး၊ တအေး လူလူ၊ နပူ လောင်လောင်၊ တတောင် ပတ်ပတ်၊ တလတ် လျားလျား၊ ရှိသည်များကြောင့်၊ ငါ့အား ကြည်ညို၊ ငါ့ဝယ် ခိုလျက်၊ ငါ့ကို နှစ်သက်၊ ငါ့လက်ထက်တွင်၊ ငါ့စက်တော်ရင်း၊ ကိုယ်ကို နှင်းမှ၊ ဖြောင့်ဝင်း သဒ္ဓါ၊ ဘာဝနာ ချပ်ငုံ၊ လိမ်းသပ် ထုံ၍၊ လးစုံ ဖိုလ်မဂ်၊ အရ တက်သည်၊ ငြိမ်သက် သဘော၊ အို သားစောတို့၊ ရှေးသောအခါ၊ ပြည်ပါဋလိ၊ မည်ရှိ သမိုင်း၊ တိုင်း အဿက၊ ပေါက်ပြ သီးသီး၊ ကျော်သံ ချီးလျက်၊ ပြည်ကြီး အင်္ဂါ၊ ပြည့်စုံစွာသား၊ အောင်ချာ စံတည်၊ ထို ရွှေပြည်ကို၊ စိုးသည် နန်းစံ၊ ရာဇဓံ၌၊ တရံ မကင်း၊ မယွင်း မယို၊ သင်္ဂြုံဟ် လေးစု၊ မင်းကျင့်မှုဝယ်၊ တခု မကျန်၊ ပြင်းထန် တန်ခိုး၊ ဖုန်းတန်း နှိုးလျက်၊ ဝှန်ဖြိုး ပေါက်ပြ၊ အဿကဟု၊ ထွ
Dhamma School ဓမ္မစကူး ဆိုတာ ဘာလဲ
ဓမ္မ ပါဠိ-မြန်မာ အဘိဓာန် (ဦးဟုတ်စိန်) တရား။ ကုသိုလ်တရား။ ပရိယတ္တိတရား။ ဝိနည်းမှကြွင်းသော ဘုရားစကား။ ဟုတ်မှန်သောသဘော။ သစ္စာတရား။ လောကုတ္တရာတရား။ ခန္ဓာအာယတနဓာတ်ဟု ဆိုအပ်သောတရား။ ကျေးဇူးတရား။ ကျင့်အပ်သောတရား။ Dharma meaning In Buddhism, the nature of reality regarded asauniversal truth taught by the Buddha; the teaching of Buddhism. School (ယုဒသန် အင်္ဂလိတ် မြမ္မာ အဘိဓာန်) စာသင်သောနေရာအရပ်။ စာသင်တပည့်စု။ စာသင်သောလူကလေး။ စာသင်ဖော်သင်ဖက်။ စာသင်သော မိမ္မကလေး။ စာသင်ဇရပ်။ School meaning 1. an institution for educating children. 2. any institution at which instruction is given inaparticular discipline. သီရိလင်္ကာမှာ Dhamma School တွေက တရားဝင်အစိုးရကဖွင့်ထားတယ်။ ယူအက်စ်အေမှာ Buddhist Church လိုလည်း ရှိတယ်။ ဓမ္မစကူးဆိုတာ မြန်မာစကားစစ်စစ် မဟုတ်။ ပါဠိ-အင်္ဂလိပ် ကပြားစာလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ ကပြားမျိုးစုံ။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာစကားစစ်စစ် ရှားပြီထင်ရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ စာသင်ဇရပ်ကို ပိုသဘောကျတယ်။ ပုံ Sri Dhammananda Dhamma School, Malabe ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Types of Brest Cancers ရင်သားကင်ဆာအမျိုးအစားများ
ရင်သားကင်ဆာဆိုတိုင်း အတူတူမဟုတ်ပါ။ ကင်ဆာ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ပြီးတာနဲ့ ကင်ဆာဆိုရင် biopsy လုပ်ပြီး အမျိုးအစားနဲ့ အဆင့် ခွဲပါမယ်။ အမျိုးအစားနဲ့ အဆင့်အရ ကုသနည်း ရွေးချယ်ကုသပေးပါမယ်။ ရင်သားထဲက ဘယ်နေရာလဲ Milk ducts နို့ပြွန်ကင်ဆာ အဖြစ်များတယ်။ Ductal carcinoma လို့ ခေါ်တယ်။ noninvasive cancer (ductal carcinoma in situ) နဲ့ invasive ductal carcinomaလို့ ၂ မျိုးရှိတယ်။ Milk-producing lobules နို့ထွက်ပြွန် မဟုတ်တဲ့နေရာကင်ဆာနဲ့ Connective tissues နေရာ (ရှားပါး) တွေကနေလည်း ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်။ Hormones ဟော်မုန်း တချို့ရင်သားကင်ဆာက ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်ပြီး တချို့က မဆိုင်။ ကုသနည်းမှာ ကွာသွားတယ်။ ဟော်မုန်းကလည်း ၂ မျိုး။ estrogen အီစထိုရှင်နဲ့ progesterone ပရိုဂျက်စတီရုန်း။။ ၁။ Estrogen receptor (ER) positive အမျိုးအစား ရင်သားကင်ဆာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေမှာ အီစထိုဂျင်ဟော်မုန်း receptors ရီဆက်ပတာတွေ ပါနေမယ်။ အီစထိုဂျင်ရရင် ကင်ဆာဆဲလ်တွေကြီးထွားမယ်။ anti-estrogen hormone (endocrine) therapy ဟော်မုန်းပေးပြီး ဘလော့လုပ်မယ်။ ၂။ Progesterone receptor (PR) positive အမျိုးအစား ရင်သားကင်ဆာ အဲဒီအမျိုးအစားမှာ ပရိုဂျက်စတီရုန်း ရီဆက
တိတ်တိတ်ခိုး၍ ရွှေကြိုးလွင်လွင်၊ ရွှေမျှင်ညက်ညက် နေလက်လက်သည် နံနက်ခင်းတွင်၊ ငါ့ကုတင်သို့ ညင်ညင်သာသာ ဝင်ခဲ့ပြီ။ ငါ့ပါးပြင်ကို ရွှေစင်ဝင်းပြက်၊ သူ၏လက်ဖြင့် အိပ်စက်ရာမှ၊ အမောင်ထ,ဟု မွှေးမြချိုသာ၊ သူနှိုးလာသည် နေဝါပြုံးပြုံး ငါပြုံးပြုံး။ အပြုံးဆင်သ၊ နှလုံးလှနှင့် နိုးထချမ်းသာ၊ ဟူသည်မှာကား ကဗျာထဲတွင်၊ စိတ်ကူးယဉ်တည့်။ ပန်းပင်မရှိ၊ နေမရှိသည့် မိမိနေရာ၊ တကယ့်ရွာကား ချမ်းသာနိုးထ၊ ဘယ်မှာရလိမ့်။ ဘဝအိပ်မက်၊ အခန်းဆက်ကား ညဉ့်နက်ထဲတွင်၊ ဆုံးမမြင်၍ စင်စင်လင်းမှ၊ တွေ့ထိရသည့် ဝင်းပပိုးသား၊ နေခြည်များက တံခါးမခေါက်၊ မိုးမသောက်သေး ကြောက်ဖွယ်သဲသဲ၊ ညငရဲကား မက်ဆဲအိပ်မက်များ ပေတကား။ ။ တင်မိုး သရုပ်ဖော် - ဗဂျီအောင်စိုး မူရင်းသတ်ပုံမှန်အတိုင်း တင်ပေးထားသူ ကျေးဇူး။ ခုခေတ်ကဗျာဆရာတွေကတော့ (တစ်)ကယ့်ရွာ တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မမြင့်ခိုင်ရေးတဲ့စာအုပ် ခုခေတ် စာရေးဆရာတွေကတော့ ချစ်သူ(တစ်)ယောက်အတွက် တဲ့။ မြန်မာစာဆရာတွေကတော့ ခင်သူ(တစ်)ယောက်အတွက် တဲ့။ ကဗျာဆရာတွေကတော့ ကြိုက်သူ(တစ်)ယောက်အတွက် တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ သတ္တဝါတခု ကံတခု ဗဂျီအောင်စိုးရေးဆွဲတာ ပထဝီ တေဇော အာပေါ ဝါယော သတ္တဝါတခု ကံတခု ခုခေတ် စာရေးဆရာတွေကတော့ သတ္တဝါ(တစ်)ခု ကံ(တစ်)ခု တဲ့။ မြန်မာစာဆရာတွေကတော့ တိရစ္ဆာန်(တစ်)ခု ကံ(တစ်)ခု တဲ့။ ကဗျာဆရာတွေကတော့ အကောင်(တစ်)ခု ကံ(တစ်)ခု တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သခင်ဘသောင်းရေးတဲ့စာအုပ် ခုခေတ် စာရေးဆရာတွေကတော့ (တစ်)ထောင့် (တစ်)ည တဲ့။ မြန်မာစာဆရာတွေကတော့ (တစ်)ထောင့် တည တဲ့။ ကဗျာဆရာတွေကတော့ တထောင့် (တစ်)ည တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အမျိုးသားစာပေဆုရ စိန်စိန် ရေးတဲ့စာအုပ် ခုခေတ် စာရေးဆရာတွေကတော့ မလင်း(တစ်)ဖုံ လင်း(တစ်)ဖုံတဲ့။ မြန်မာစာဆရာတွေကတော့ မှောင်(တစ်) ဖုံ မည်း(တစ်)ဖုံတဲ့။ ကဗျာဆရာတွေကတော့ မီးပျက်(တစ်)ဖုံ မီးမလာ(တစ်)ဖုံတဲ့။ ရေစီးတခါ ရေသာတလှည့် သခင်မြသန်းရေးတဲ့စာအုပ် ခုခေတ် စာရေးဆရာတွေကတော့ ရေစီး(တစ်)ခါ ရေသာ(တစ်)လှည့် တဲ့။ မြန်မာစာဆရာတွေကတော့ ရေမစီး(တစ်)ခါ ရေမသာ(တစ်)လှည့် တဲ့။ ကဗျာဆရာတွေကတော့ ရေမလာ(တစ်)ခါ ရေပျက်တာ(တစ်)လှည့် တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သည်ကမ္ဘာက လွတ်ကာ ထွက်ပြေး၊ အဝေးကြီးမှာ တယောက်တည်းသာ နေချင်၏။ (မောင်ဝဏ္ဏ) • မူရင်းစာနဲ့ မူရင်းသတ်ပုံမှန်တွေကို မဂ္ဂဇင်းတွေမှာသာ တွေ့ရတော့တယ်။ • မဂ္ဂဇင်းဟောင်းများသည် ကနေ့ထုတ် ခန့်ချုပ်၊ ကွန်ပြူတာစာစီထုတ်တွေထက် တန်ဘိုးကြီးတယ်။ • မြန်မာစာပေမှာ မဂ္ဂဇင်းဟောင်းတွေဟာ ဒုတိယ မြစေတီကျောက်စာ ဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တညလည်၌ ဆောက်တည်မရ၊ စိတ်နွမ်းလျလှ ယုယမည့်သူ ပူပင် ကင်းမဲ့ ၊ အိပ်ပျော်ခဲ့ထင့် ဇာလဲ့အိပ်ရာ၊ ထလာဖြေးဖြေး မြူမှေး ရစ်သန်း၊ လူတိတ်လမ်း၌ ပက်ဖျန်းငွေမှုန့်၊ နှေးတုံ့ လ, မျှင် ညှိုးသမ်းမြင်ခဲ့ သစ်ပင်ရိပ်ပြောက်၊နှင်းမိုးပေါက်ကြား ချောက်ချားတဝက်၊ ပူလောင် မျက်ရေ အိပ်မက် ကြေကွဲ၊ ထွေးပတ်ဆဲမှာ မရဲတရဲ လျှောက်ခဲ့မိ၏။ ငယ်ရွယ်လေးပင် ပူဆွေး ဒုက္ခ၊ နားလည်ရဟန် မိဘ စိတ်ကွဲ၊ လမ်းခွဲခဲ့ဟန် ကြင်ဖွဲ့ မောင်ငယ်၊ သေပျောက်ကွယ်ဟန် တွယ်ငြိ မိတ်ဆွေ၊ ကွေကွဲ ဖောက်ပြန် လွတ်မြောက် ချမ်းသာ၊ အချစ်၌ ရှာသည် ဘယ်မှာ မတွေ့၊ လမ်းမှာ ကွေ့ကောက် ရောက်ရာ ဘဝ၊ ကံပစ်ချရာ မာန ချိုးနှိမ်၊ စိတ်ညှိုးသိမ်ခဲ့။ တွယ်ငြိခြင်းသည် ဆင်းရဲ အစ၊ သံသာရဟု ချမ်းမြသိလဲ၊ တွယ်ငြိမြဲပင် ရဲဝံ့သည်လား၊ ကြောက်သည်လားဟု ငြင်းပွား စိတ်ထွေ၊ အဖြေခက်သည် တပ်မက် မှီနွဲ့၊ မောဖြေလှဲ့ဟု မောင်ရဲ့ ခေါ်သံ၊ သဲ့သဲ့ညံမှ ပြန်လာတုံ့ လျှင်၊ အိမ်ပြန်ချင်ငဲ့ ရင်ခုန်ထိတ်ခဲ့ပြီတကား။ ။ ကြည်အေး (၁၉၂၉ - ၂၀၁၆) သရုပ်ဖော် - ဗဂျီအောင်စိုး
Tourette disorder ဆေးသုတေသန
Tourette syndrome လို့လည်းခေါ်တဲ့ရောဂါကို ကုသနည်းသစ်အတွက် ဆေးသုတေသနလုပ်နေတယ်။ ပါဝင်လိုသူတွေ စာရင်းပေးပါလို့ ခေါ်နေတယ်။ ယူအက်စ်အေမှာ။ ဒီမှာက ရောဂါတွေ၊ ဆေးတွေအားလုံးကို အမြဲမပြတ် လေ့လာမှုပြုတယ်။ ပါဝင်လိုသူတွေကို ဗော်လန်တီယာခေါ်တယ်။ တချို့က ပိုက်ဆံပါပေးတယ်။ ဒီရောဂါက ခန္ဓာကိုယ်တနေရာရာ ဥပမာ လက်၊ ခြေ၊ မျက်စိ၊ ပခုံးမှာ စိတ်ကနေထိန်းမရဘဲ လှုပ်နေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကလည်း အဲလိုသုတေသနတွေနဲ့ ပေါ်လာတာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဖယောင်းတိုင်မီးကို Art လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓမ္မသဘော သဘာဝတရား အသုဘအလျဉ် ပရမတ်ဖော်မှုဉာဏ်နဲ့သိမှမြင်၏။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမြင်ရသော ပညာစစ်။ • ဖရင်းထဲကဖြစ်လို့ ဖောင့်ပြောင်း ဖတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံး Art ကိုတော့ တန်းသိတယ်။ • အနုပညာစာလုံးတဲ့။ ကနေ့မနက်မှာ ART ဆေးအကြောင်းလည်း မေးတယ်။ • ဆေးပညာမှာ အတိုကောက်တွေက များတယ်။ တခါတခါရှုတ်ထွေးတယ် ART ကို စောစောပိုင်းက ARV လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးကိုလည်း ARV လို့ခေါ်တယ်။ • သယ်ပို့စနစ်တခုကို Deli လို့ရေးတော့ နားမလည်။ Deli ဆိုတာ စားစရာရောင်းတဲ့ ဆိုင်ခပ်သေးသေးကို ခေါ်တယ်။ • ဖေ့စ်ဘွတ်မှာရေးကြတဲ့ တချို့ မြန်မာစာတွေနဲ့ တချို့အင်္ဂလိပ်စာတွေကို နားမလည်ပါ။ • ကျောင်းပြန်တက်ရင် တတ်ထားတာပါ ပြောင်မယ်။ • Art ဆိုတာ ပန်းချီ၊ ပန်းပုစတဲ့ အနုပညာ။ Arts ဆိုတာ သမိုင်း၊ စီးပွါးရေး၊ ဖီလော်ဆော်ဖီ စတဲ့ ဝိဇ္ဇာပညာတွေတဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်း စကားပြောနေကြပါသည်။ မြန်မာပြည်က ထာဝရငြိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ မတူတာ တချက်က။ အဝတ်အစားလို့ မြင်နေရတယ်။ သူတို့ဆီမှာ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံ၊ တိုက်ပုံနဲ့ စုံချပုဝါတွေ မတွေ့ပါ။ ကက်ပ် ဦးထုပ်ဆောင်းထားတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ကက်ပ် ဦးထုပ် လေးငါးလုံးရှိတယ်။ နေပြည်တော်က မခေါ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
(ကန်တော့) ၁။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဆိုတာဘာလဲမှာ သတ်ပုံမှန်တယ်။ ၂။ အဖြူဆင်းများနေရင်ဘာလုပ်ရမလဲ စာမှာက (တ) စသတ် ကင်ဆာ။ ၃။ သား ဥအိမ် ကင်ဆာ အကြောင်း သိကောင်းစရာစာမှာက (တ) စသတ် ကင်ဆာ။ • ကျန်းမာရေးပညာပေးစာတွေ ဆရာဝန်တွေရေးတာလားတော့ မသိပါ။ သတ်ပုံမှတ်တာ တခုနဲ့ လျှာရှည်တာ ၂ ခုတွေပါတယ်။ • ဆရာဝန်တွေကို မြန်မာစာသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာ မတူကြပါ။ • မြန်မာစာဆရာတွေကလည်း သူတို့စာသင်စဉ်က သတ်ပုံမှန်တွေဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံတော်မူက မှားတော့ မှားတဲ့လမ်းလိုက်ကြတာတွေ့တယ်။ • အဖြူဆင်းတာနဲ့ မျိုးပွားလမ်းကင်ဆာတွေထက် နေရာ ရာထူး ကုလားထိုင်က ပိုအရေးကြီးတာကိုး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဆိုတာဘာလဲ https://cancercaremyanmar.com/cervical-cancer-3/?fbclid=IwAR0Pbt3LaaEq50qNfr5VCiMGey_HvY_E_Iu8fRyJjtaP1M3InC_ItmFrAbc သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် သားအိမ်ခေါင်း၏ တစ်သျှူးတွင် ဖြစ်ပွားသော ကင်ဆာတမျိုးဖြစ်သည်။ ဒီကျန်းမာရေးအသိပညာပေးစာကို ကျွန်တော်ရေးတာ မဟုတ်ပါ။ စာရေးထားတာ သတ်ပုံလည်း မှန်တယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ • စာရေးတာ သတ်ပုံမှန်မှသာ စာပါအချက်အလက်တွေလည်း မှန်နိုင်တယ်။ • တစ်သျှူး (တစ်ရှူး) ကို စသတ်နဲ့ ရေးရပြီး၊ ကင်ဆာတမျိုးရေးမှာ စသတ်မလိုအပ်ပါ။ • ကျွန်တော်ကတော့ သားအိမ်ဝလို့ ရေးပါတယ်။ အများစုက သားအိမ်ခေါင်းလို့ ရေးတယ်။ စာဖတ်သူတွေကလည်း သားအိမ်ခေါင်းလို့ရေးမှသာ နားလည်ကြတယ်။ ဆောရီး။ • ဆေးနည်းတွေပေးကြတာ သတ်ပုံက မမှန်။ ရောင်းကောင်းတယ်။ • တရားစာတွေရေးကြတာ သတ်ပုံကမမှန်။ သာဓုခေါ်ကြတယ်။ • မြန်မာပြည်မှာ (တ) စသတ်ကင်ဆာ ကူးစက်နေတာကြာပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အမေက အူမကြီး ကင်ဆာနဲ့ ခွဲစိတ်ပီး (ပြီး) ဓာတ်ကင်ထားတာ ၅လ လောက်ရှိပါပီ (ပါပြီ) ပြန်ပီးလည်း ကျနိးမာနေပါပီ (ပါပြီ) ညမတခုလောက်သိချင်တာက အမေ့ကို COVID vaccines ထိုးပေးရ ကောင်းမလား မထိုးရဘူးလား ဝေခွဲမရလို့ပါ ဆရာဝန်ကတော့ထိုးလို့ရပီ(ရပြီ)လို့ပြောပါတယ် ဒါပေမယ့် တချို့လည်း ဆေးထိုးပီး (ထိုးပြီး) ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်တာ ပြန်ကုရတာတွေ မြင်နေတွေ့နေကြားနေရလို့ မထိုးပေးတာ ပိုကောင်းမလားလို့ တွေးမိလို့ အကြံဥာဏ်လေးတောင်းတာပါ ဆရာဝန်ကို မေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ကင်ဆာနဲ့ ကိုဗစ်၊ ကင်ဆာနဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း မကြာခဏဖြေရ၊ ခဏခဏတင်ရတယ်။ အခံရောဂါရှိသူတွေက ကျန်းမာနေသူတွေထက် ပိုပြီး ကိုဗစ်ကို သတိထားရမယ်။ ကာကွယ်ရမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်။ အခံရောဂါတွေထဲမှာ ကင်ဆာလည်းပါတယ်။ ကင်ဆာအခံရှိသူတွေကို ကူးစက်ရင် ကင်ဆာမရှိသူတွေထက် ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။ တခုလောက်၊ တချို့ ရေးတာတွေ မှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ဖုန်းထဲက ကီးဘုတ်မှာ ရရစ်မပါသေးရင် ထည့်သင့်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ ဒီ​နေ့ တ​နေ့လုံး မီး ၄ နာရီ လာသွား သည်။ ​ရေအပြည့် တင်နိုင်ခဲ့သည် ၂။ အမှောင်ခေတ်ကို တနေ့ ၄နာရီအနည်းဆုံးသည်းခံကျော်ဖြတ်နေရတယ် စောင့်တဲ့လေးနာရီ - ဟိုအရင်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ရေဒီယိုသီချင်း။ နှစ်ကိုယ်ကြင်တဲ့ အကိုလင်ရဲ့ ပျိုခင်နွဲ့ ကြိုတဲ့လေးနာရီ ထိုးပြီထိုးပြီ လာပါတော့ အခါခါမော့ မာလာဖော့ မျှော်ပေါ့လေးနာရီ ထိုးပြီထိုးပြီ။ မောင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပြန်လာမယ်လမ်းဆီ မှန်းဆလို့အခါခါတွေး အစဉ်ငေးရသည် မောင်ရောက်ချိန် နီးပါပြီ မောင်ရောက်ချိန် နီးပါပြီ ဇနီးအလှဒါလီ သာကြည်စကားနဲ့ ဗျာကသီအနားကပ်လို့ ပါးအပ်ခါအတည် နှစ်ကိုယ်တည်းကြားရအောင် မောင် မောသလားလို့ မောသလားလို့ သူ့အနားဆီ တိုးတိုးလေးနဲ့မေးမည် ရိုးရိုးလေးနဲ့မေးမည် တွေးခါမှီနေ့စဉ်စောင့်တဲ့ လေးနာရီ။ ဟိုအရင်က ရုံးတွေ ကျောင်းတွေက ညနေ ၄ နာရီမှာ ရုံးဆင်း၊ ကျောင်းဆင်းပါတယ်။ မနက် ၉ နာရီခွဲမှာ စတက်ကြရတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အမျိုးသမီးများ ခါးတုတ်ရင် နှလုံးရောဂါရလမ်း ပိုစေနိုင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နာရီက သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ခါးနဲ့ တင်ပါးအတိုင်းအတာ အချိုးအစားကိုကြည့်ပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်သူတွေကို လေ့လာတာဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေထက် ပိုနေတာ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းမှာ ခါးတုတ်သူတွေကို ပန်းသီးပုံလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Waist-to-hip ratio ခါး-တင် အချိုးအစားဟာ ဝတယ်လို့ပြောလေ့ရှိတဲ့ Body mass index (BMI) ကိုယ်ထုထည်ထက် ပိုပြီးပြောလို့ရတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ၆% က နှလုံးရောဂါရကြပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ ၁၈% ရတယ်။ ဆောရီး။ BMI များရင် ကျားရော မ ပါ နှလုံးရောဂါရလမ်းပိုတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကို ယူကေနိုင်ငံမှာ အသက် ၄ဝ ကနေ ၆၉ နှစ်ရှိသူ လူပေါင်း ၅ သိန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Heart attack symptoms နှလုံးရောဂါလကဏာတွေကတော့ 1. Chest pain ရင်ပတ်နာခြင်း၊ နာတာက ကိုယ်တခြမ်းနဲ့ လက်အထိနာခြင်း၊ 2. Feeling lightheaded or dizzy ခေါင်းထဲပေါ့နေပြီး မူးခြင်း၊ 3. Sweating ချွေးပြန်ခြင်း၊ 4. Shortness of breath အသက်ရှူမဝခြင်း၊ 5. Feeling or being sick နေမကောင်းတာကိုခံစားရခြင်း၊ 6. Overwhelming sense of anxiety စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်း၊ 7. Coughing or wheezing ချော
ပို့စ်တွေမှာ ဖတ်ရတယ်။ ပြောကျိလေတဲ့။ ကွန်မင့်မှာလည်း ရေးလာတယ်။ ပြောကျိတာတဲ့။ ပြောကြည့်လေ၊ ပြောကြည့်တာဆိုတာ မသေမချာ မရေမရာတာကို ပြောစေတာ၊ ပြောနေတာသာဖြစ်တယ်။ ဒီခေတ်မှာ ခိုင်မာတိကျတာတွေရှာလို့ မခက်ပါ။ အမှားတွေ အလွဲတွေကတော့ ရှာနေစရာမလိုပါ။ သည်ကြားထဲမှာ ပြောကြည့်တာတွေကိုတော့ ကန်တော့ဆွမ်းပါ။ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေ နောက်ပြောင်ကြတဲ့စကားတခုရှိတယ်။ ကြည့်ချင် တရော် -င်ကြားညှပ်တဲ့။ ကန်တော့ပါ။ တရော်ဆိုတာ ခေါင်းလျှော်ရာမှာ ကင်ပွန်းသီးနဲ့တွဲ သုံးတယ်။ ချွဲကျိတယ်။ သတ်ပုံတော့ မတူဘူး။ ဒီတရော်တွေက ရှမ်းပြည်ကလာတယ်။ အသင့်ထုထားပြီးသား ၊ တရော်ကင်ပွန်း ခေါင်းလျှော်ရည်လုပ်ဖို့ပါ။ တရော်ပင်ရဲ့ မျိုးစုအမည်က Grewia ဖြစ်ပြီး Malvaceae မျိုးရင်းထဲမှာပါတယ်။ ဘုရားအပြန်လက်ဆောင်ဝယ်ကြတဲ့ အမှတ်တရ ဒေသထွက်ကုန်တမျိုးပါဘဲ။ (Kothet Naing Oo) ကျေးဇူး။ တရော်ကို စသတ်နဲ့ရေးသူတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကွန်မင့်တခု - ကပ်ရောဂါ ကာလမှာ (ကိုမြင့်နိုင်ကြီး နဲ့ ဥမ္မာခင်)တဲ့ ထယ်လဲ စကားလုံးကို တခုတ်တရ အရာရှိလုပ်သူတွေကိုယ်တိုင် ပြောကြတယ်၊ ဘယ်ဆရာက သွန်သင်လို့ ဘာအရာထမ်းဖြစ် တဲ့။ (ကင်ဆာ) ကို (ကင်စာ) လို့ရေးမေးလည်း ဖြေပါတယ်။ အဖြေစာမှာ ဓါတ်ကင်ကို ဓါတ်ဖမ်းပါလို့ မရေးပါ။ (ခီမို) ကို အနုပညာရှင် (ခီ) လို့ မရေးပါ။ ဖျားတဲ့သူကို (ပါလေရာ) သောက်ပါလို့ မဖြေပါ။ (ကိုဗစ်) ကို (ကိုပစ်) လို့ ရေးမေးလည်း ဖြေတယ်။ အဖြေစာမှာ (ဘူစတာ) ကို (ဘူဒိုဇာ) ထိုးပါလို့ မရေးပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁ ညသည် အလှလျှို့ဝှက်၊ အရှက်ကြီးစွာ ကြာပန်းနှင့်ကွယ်၊ တိတ်ခိုးရယ်သော မိန်းမငယ်ကဲ့သို့။ ညပျိုခင်သည် ကြယ်စင်တစု၊ အလင်္ကာပြုလျက် ခရုပတ်လမ်း၊ လူ့စခန်း၌ ဖြတ်သန်းသွားစဉ်။ ခြေကျင်းတခတ်၊ လျှပ်စစ်တသံ ကာရန်တကျော့၊ ခြေတဖော့နှင့် ဝန်းကော့နက်ရှိုင်း၊ သက်တန့်ကိုင်းက စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံ ပေါ်လာ၏။ ၂ အလင်းရောင်တန်း၊ ခပ်လှမ်းလှမ်း၌ စမ်းဝါးစမ်းဝါး၊ လမ်းသလားစဉ် ညကား အဓိပ္ပါယ်လောင်းဖြည့်လျက်။ မှောင်အားကကြီး၊ လင်းအားနည်းဟု ညည်းရှိုက်သံများ၊ လေမှာတွားလျက် ဝါးပင်ရုံထက်၊ ငှက်တို့အနီး ဆီးပွင့်သင်းသင်း၊ တောတွင်းအနှ့ံ သတင်းဖြန့်လျှင် အလန့်တကြား၊ တတန့်နားရ။ ညများဖြစ်ပေါ်၊ မှောင်ပါသော်လည်း ဘော်ရောင်တစ၊ မိုးကမ်းစ၌ တွန့်ရွကွေးကွေး၊ အနားရေးတည့်။ ငှက်ကလေးထောင်သောင်း၊ ဤသစ်ခေါင်း၌ အောင်းကြရံခါ၊ ပျော်စရာပင် ယာစပ်လယ်စပ်၊ ဆူးချုံစပ်၌ ငှက်တပ်ကျက်စား၊ တလွှားလွှားတို့ နားလိုနေလို၊ အမှောင်လို၏ ညကို ကျေးဇူးတင်ဦးအံ့။ ဆရာတင်မိုးရဲ့ဒီကဗျာက အတော်ရှည်ပါတယ်။ ၁ ကနေ ၁၅ အထိ။ မူရင်းသတ်ပုံမှန်အတိုင်းတင်ထားတာကနေ ကူးယူတာပါ။ ကျေးဇူး။ ရောင်းတန်းစာအုပ်တွေနဲ့ တချို့အွန်လိုင်းမှာတင်ထားတာတွေက ပေါ်လစီသတ်ပုံတွေနဲ့။ ဖတ်မကောင်းတော့ပါ။ ဆရာတင်မိုးကို နည်းနည
တစိမ့်စိမ့်နှင့် နှစ်သိမ့်ကြည်နူး ရွက်သစ်ဖူးသော် ရွှင်မြူးအံ့ဩ ဖော်ချင်းနှော၍ တောင်တောသာခွင့် ရာသီဖွင့်လျက် ပင်မြင့်ထက်တွင် ငှက်သဘင်လည်း တူယှဉ်နှစ်ကိုယ် ချစ်တင်းဆိုသည် မပို၏သို့ ပို၏သို့။ တသိမ့်သိမ့်နှင့် ညှင်းငြိမ့်လေပွေ ထက်ဝန်းဝေလျက် နွေလည်းအဝင် ဆောင်းလျှင်အစဲ မတည်ဘဲလျှင် ဖက်လှဲတကင်း ပန်းနံ့သင်းကို ချဉ်း၍ ချဉ်း၍ ဆောင်ကာ ဝှေ ့လျက် ရွှန်းမြေ့သလို သွင်းလာပိုသည် မချို၏သို့ ချို၏သို့။ တငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် လှိမ့်၍လှိမ့်၍ လေအဝှေ ့ဝယ် ကြွေမြေ့ခမန်း အသံစမ်းလျက် သာဆန်းရဂုံဘွေ နွေဦးမေလျှင် မျှော်လေယောင်မော့ တေးကိုကျော့၍ လေးတော့်နတ်သွင် ထက်ဝန်းကျင်ကို ကြည်ရွှင်ခလို ချစ်ဖွယ်ဆိုသည် မပျို၏သို့ ပျို၏သို့။ တခြိမ့်ခြိမ့်နှင့် သံနိမ့်သံမြင့် သံချိုဆင့်၍ ခါသင့်မထင် မိုးနတ်ရှင်လည်း ရှစ်ခွင်တလွှား ပြေးကစား၍ လှည့်စားလေဟန် မိုးရိပ်ဖန်လျက် နဘံတခို တိမ်ခိုးသိုသည် မညို၏သို့ ညို၏သို့ ။ ။ နန်းညွန့်ဆွေကဗျာကို မူရင်းသတ်ပုံနဲ့တင်ပေးထားသူကို ကျေးဇူး။ အဲလို မူရင်းအမှန်အတိုင်း တင်ရကောင်းမှန်းသိသူက ရှားတယ်။ ကိုယ်စပ်တာမဟုတ်ဘဲ သတ်ပုံပြင်တင်နေကြတဲ့ ခေတ်ပျက်။ ကဗျာပျက်။ အလွန်ကိုခေတ်မီကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေကတော့ တစ်စိမ့်စိမ့်နှင့်တဲ
မြိုင်ဝေတောကြီး၊ ဤခရီးဝယ်၊ ချည်းနှီး သက်သက်၊ သေသော့ထက်ကား၊ ဆက်လက် တညီ၊ တစီတလျဉ်၊ သားစဉ် မြေးမြစ်၊ ပြောထုံးဖြစ်အောင်၊ ဘဝဂ် တမက်၊ ကိုယ်နှင့် သက်ကို၊ နှင်းဆက် တိုက်မည်၊ အားသံရည်၍၊ ဦးလည် မသုန်၊ ထမ်းပါကုန်လော့။ ။ (လက်ဝဲသုန္ဒရ) ၅၇။ တသင်း တသင်း၊ ဆိုင်ရာခင်း၍၊ နားသွင်း သီးသီး၊ ဆုံးမပြီးသော်၊ လက်ဝဲသုန္ဒရ ဘွဲ့ခံ အမတ်ကြီး ဦးမြတ်စံ၏ နန္ဒီသေနပျို့ တည်းဖြတ်သူ မောင်သုတ အမည်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး ဘသောင်း (မဟာဝိဇ္ဇာ) ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆရာက ဆေးပညာဒေါက်တာလား၊ မြန်မာစာဒေါက်တာလားဆရာ။ • ကျွန်တော်က ဆေးပညာဘွဲ့ရ ဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ • ဆရာဝန်က တခါတခါ လူနာဖြစ်တယ်။ • မြန်မာစာကို ၁၂ တန်းအထိသာ သင်ယူခဲ့ဘူးတယ်။ • ဆေးကျောင်းမသင်ခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးထဲကိုပါ ဝင်လုပ်တယ်။ • နိုင်ငံရေးအလုပ်က ပါးလာတော့ မြန်မာစာလူနာကိုပါ တတ်စွမ်းသလောက် ကုသပါတယ်။ • ကနေ့ မြန်မာစာက နာတာရှည်။ ပြင်ပလူနာကုထုံးနဲ့ မရတော့ပါ။ (အိုင်စီယူ) ထဲ သွင်းရတော့မယ်။ • လူနာရှင်က သဘောမတူတဲ့။ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ။ • ဆရာဝန်ဆိုတာ လူနာရှင်သဘောမတူရင် မေ့ဆေးပေးခွင့်မရှိ။ ခွဲစိတ်ကုသခွင့်မရှိပါ။ • လူနာကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ အရိုးထုတ်တော့မယ်တဲ့။ • လူနာက ဆေးခါးကြီး မမျိုချင်။ လည်ပင်းမှာ (တစ်) နေလို့တဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
The day before yesterday တမြန်နေ့
၁။ တမြန်ပြင်တနေ့လို့သုံးတာ မသိခဲ့ဘူးရှင့် ကျမက တမြန်မနေ့ကလို့ ထင်နေခဲ့တာ တချိန်လုံး မှားနေခဲ့တာ ခုမှသိရလို့ ကျေးဇူးပါဆရာ ၂။ မြန်မာစကားမှာ မနက်ဖြန် သဘက်ခါ ဖိန်းနွဲခါဆိုပြီး ရှိပါတယ် ဖိန်းနွဲခါ ဆိုတဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အမှန်က ဘယ်လိုဘာလဲဆရာ မနက်ဖြန် သဘက်ခါ ဖိန်းနွဲခါ စသည်စသည့်ဖြင့် အခေါ်ဝေါ်လေးတွေ တင်ပေးပါဆရာ ၃။ ဆရာ မနက်ဖြန်၊ သန်ဘက်ခါ၊ ဖိန်းနွှဲခါ စတဲ့စကားတွေက မြန်မာစကားလား။ မဟုတ်ဘူးဆိုလဲ ဘယ်ဘာသာက ဆင်းသက်တာပါလဲ။ သိချင်စိတ် ပြင်းပြနေလို့ပါဆရာ။ နက်ဖြန်၊ သန်ဘက်ခါနဲ့ ဖိန်းနွှဲခါ အားလုံး ခေတ်ဟောင်း သတ်ပုံကျမ်းမှာပါတယ်။ စကားအရာမှာတော့ နက်ဖန်လို့ပြောကြပေမယ့် နက်ဖြန်ကသာ စံကိုက်သတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တနေ့က သန်ဘက်ခါ၊ သန်ဘက်ခါရဲ့ နောက်တနေ့က ဖိန်းနွှဲခါ၊ ဖိန်းနွှဲခါရဲ့ နောက်တနေ့က ဖိန်းသန်ဘက်ခါ။ ယနေ့ (ဒီနေ့၊ ကနေ့) = ၂၇-၂-၂၀၂၂ မနေ့က (ယမန်နေ့) = ၂၆-၂-၂၀၂၂ တမြန်နေ့ = ၂၅-၂-၂၀၂၂ တမြန့်ပြင်တနေ့ = ၂၄-၂-၂၀၂၂ နက်ဖြန် (မနက်ဖြန်) = ၂၈-၂-၂၀၂၂ သန်ဘက်ခါ = ၁-၃-၂၀၂၂ ဖိန်းနွှဲခါ = ၂-၃-၂၀၂၂ ဖိန်းသန်ဘက်ခါ = ၃-၃-၂၀၂၂ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မဝတဝ၊ စားပါရလည်း အိပ်ရချောင်တွင်၊ စိတ်မရွှင်တည့်။ တခဏမျှ၊ ရယ်ပါရလည်း ငိုရကြာရှည်၊ စိတ်မကြည်တည့်။ အစအန၊ ပျော်ပါရလည်း ပူရမြင့်မို၊ စိတ်မပျိုတည့်။ ချိုချိုသာသာ၊ ပြုံးမျက်နှာအား ရှာသော်မရ၊ မျက်ရည်စနှင့် သောကနှင့်သာ၊ ကြုံရပါသည် တံထွာလောက လူ့ဘဝ။ ဇော်ဂျီ သရုပ်ဖော် - ဗဂျီအောင်စိုး ကပ္ပလီ ကဗျာဆရာ ပေါ[လ်]လောရင့်ဒန်ဘား [Paul Lawrence Dumber ၏ ကဗျာကို ပြန်ဆိုသည်] ကဗျာကို မူရင်းသတ်ပုံမပျက် တင်ပေးထားသူ ကျေးဇူး။ တချို့က ကိုယ်စပ်တဲ့ကဗျာမဟုတ်ဘဲ သတ်ပုံတွေပြင်ကြတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွ
Breast Benign Lumps ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်များ
(ကန်တော့) သမီး အသက်​က ၂၈ပါဆရာ ရင်​သားတဖက်​က အကြိတ်(အကျိတ်) ​အလုံးလိုမဟုတ်​ပါဘူးရှင်​့ အထဲမှာအ​ကြော​တွေက ​ရောင်​​နေသလို တဖက်​ထဲကြီး​နေတာပါရှင့်ရင်​သားကင်​ဆာဖြစ်​မှာ စိုးရိမ်​လို့ပါရှင့် မိန်းကလေးတိုင်း အမျိုးသမီးကြီးငယ်တိုင်း ကိုယ့်ရင်သားကိုယ် စမ်းသပ်ပြီး၊ သံသယရှိရင် ချက်ချင်း ဆရာဝန်ကို ပြသင့်တာ သိနေကြပါပြီ။ ကင်ဆာဆိုရင် ကြောက်စရာမှန်ပေမဲ့ စောစောသိလို့ စနစ်တကျကုသရင် အများကြီး ကောင်းစေတဲ့ ကင်ဆာထဲမှာ ရင်သားကင်ဆာက ထိပ်ကနေတယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်တွေက ၈ဝ% ရှိတယ်။ အမျိုးအစားကတော့ များပါတယ်။ ယေဘုယျပြောရရင် အကျိတ်နခမ်းသားက ချောမွေ့နေမယ်၊ ရွေ့ရှားလို့လဲ လွယ်တယ်။ အကျိတ်ရယ်လို့ မဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်မိလို့၊ ရာသီလာခြင်းနဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊ ဆေးဝါးတွေကနေလည်း ရင်သားမှာ အရင်လိုမဟုတ်တာမျိုး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ရင်သား နှစ်ဘက်ဟာ တသက်လုံး ပြောင်းလဲနေတာပါ။ အသက်ငယ်သူတွေမှာ ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်တွေကတော့ - (၁) Fibrocystic changes (ဖိုက်ဘရိုဆစ်စတစ်) အပြောင်းအလဲ။ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲနေတာကနေ ဖြစ်စေတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးမှာ ဖြစ်တာများတယ်။ ဥပမာ ရာသီမလ
တခါတခါမှ လာဖတ်ပြီး ဆရာ့စာတွေ မတွေ့တာကြာပြီတဲ့။ တချို့က ဆရာငြိမ်နေတယ်တဲ့။ ကျွန်တော့က အိပ်နေချိန်ကလွဲရင် လိုင်းပေါ်မှာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရှိတယ်။ နေမကောင်းမဖြစ်တာလည်း ကြာတော့ ပျက်ရက်လည်းမရှိပါ။ မေးတာတွေဖြေပါတယ်။ သူများရေးတာတွေဖတ်ပြီး တင်သင့်တာ တင်တယ်။ ကိုဗစ်သတင်းကို ၄-၁-၂၀၂၀ နေ့ကတည်းက နေ့တိုင်းတင်တယ်။ ကင်ဆာအကြောင်း မရေးရတဲ့နေ့ မရှိ။ အခုရက်တွေမှာ ယူကရိန်းသတင်း။ အင်တာဗျူးတွေက လာတဲ့အခါ လာတယ်။ ရေဒီယိုတခုက နက်ဖြန်အတွက် ကနေ့ချိန်းထားတယ်။ တခြား ရေဒီယိုတခုက တမြန်ပြင်တနေ့က မေးတော့ ကျွန်တော့ထက် ပိုသင့်တော်သူကို လွှဲလိုက်တယ်။ မနေ့က အင်တာဗျူးကို တင်ထားပြီးပြီ။ မနက်က အွန်လိုင်း နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးတခု လွတ်သွားသေးတာ။ လုပ်သမျှအကုန်တော့ မတင်ပါ။ အခုစာရေးနေရင်း ဘောလုံးပွဲ ကြည့်နေတယ်။ အခုထိ သုည-သုည။ နေ့လယ်စာ မစားရသေး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဝိဇ္ဇာ နှင့် သိပ္ပံ
အခုလက်ခံရေးသားနေတဲ့ ဝိဇ္ဇာ ကို သိပ္ပံ၊ သိပ္ပံ ကို ဝိဇ္ဇာ လို့ အရင်က ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး တက္ကသိုလ်တွေကို ဝိဇ္ဇာ နှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်လို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကျောင်းသားမရှိတဲ့၊ ဆရာမရှိတဲ့၊ ပညာသင်မပေးတော့တဲ့ တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ မြန်မာစာသတ်ပုံတွေ ပျက်ကုန်ပြီ။ ခေတ်အပြောင်းအလဲဆိုတာ မှန်ရာမှညံ့ပြီး၊ ကောင်းရာကနေ ဆိုးတတ်ပါသည်။ မြန်မာစာကို သိပ္ပံဘာသာလို့ လုပ်ဦးမလား မပြောတတ်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ (ဂီနီပစ်) ဖြစ်နေခဲ့ရတာ ကြာပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စရဏတရား ၁၅ ပါး ၅။ သဒ္ဓါ - ရတနာသုံးပါးနှင့်တကွ ကံ - ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ခြင်း။ နှင့်တကွ ရေးတာ မှန်။ တရားစာတွေရေးတင်ကြတာ သတ်ပုံမှန်တာက ရှားတယ်။ အပျော်အပျက်ရေးသူတွေ သတ်ပုံမမှန်ကြတာထက် တရားစာမှာ သတ်ပုံမှားတာက တာဝန်ပိုကြီးတယ်။ သို့ နိုင်ငံခြားရေး ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ၊ ကင်းဝန်မင်းကြီး၊ မန္တလေးမြို့။ နေ့ ၁၈၇၉-ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက် ချစ်ကြည်လေးစားစွာဖြင့် သတိပေးရေးသားအပ်ပါ သည်။ သီပေါမင်းတရား၏ အနွယ်တော်များ ဖြစ် ကြသော မင်းဆွေစိုးမျိုး ၄၀-ကျော်ကို တရားမဲ့ သတ်ဖြတ်ပစ်ကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် ကျွန်ုပ်နှင့်တကွ ဝိတိုရိယဘုရင်မကြီးပါ များစွာထိတ်လန့် တုန်လှုပ်၍ ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်း ဖြစ်ကြရပါသည်။ နှင့်တစ်ကွတွေ၊ နှင့်နှစ်ကွတွေ ပျောက်ပါစေသတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ